Adepts, Masters uye Mahatmas
Tsvaga Adepts, Masters neMahatmas editorials
ADEPTS, MASTERS NA MAHATMAS.
Apo amai vakayambuka mahat, ma vachange vari ma; asi ma vachabatana namaahat, uye vave mahat-ma.
Vol. 9 JULY, 1909. Nha. 4
Copyright, 1909, neHW PERCIVAL.
MASHOKO aya ave ari kushandiswa kwemakore mazhinji. Iviri yekutanga inobva kuLatini, yekupedzisira kubva kuSanscrit. Inzwi izwi rakange riri mukushandiswa kwemazana emakore akawanda uye rakashandiswa nenzira dzakawanda. Yakanga iri, zvakadaro, yakashandiswa neimwe nzira nevanoparidzi vezvinyorwa zvenhau, avo vakashandisa izwi iri, vaireva mumwe akanga awana ruzivo rwechimiro chechimiro, uye ndiani aive akachenjera mumutambo wea alchemy. Pamwe chete, izwi iri raishandiswa kuna ani zvake aive akachenjera mune unyanzvi hwake kana basa. Izwi shoko master rave riri kushandiswa zvakafanana kubva panguva dzekare. Inotorwa kubva muchiLatini magister, mutongi, uye yakashandiswa senzvimbo yekuratidza munhu ane simba pamusoro pevamwe nekuda kwemabasa kana simba, sevakuru vemhuri, kana semudzidzisi. Yakapiwa nzvimbo yakakosha mumashoko ekunyorwa kwemasayendisiti uye maRoicician ezvinyorwa zvemashoko ezvirevo seanoreva uyo akanga ave nyanzvi yehurukuro yake, uye ndiani aikwanisa kutungamirira nekuraira vamwe. Izwi rokuti mahatma ishoko risina kunyorwa, iro rinoreva zvakajeka kuva mweya mukuru, kubva maha, guru, uye atma, mweya, kufanana nezviuru zvemakore. Izvo hazvina, zvisinei, zvakabatanidzwa muchiRungu kusvikira nguva dzazvino, asi zvino zvingawanika mumabhuku ekunyora.
Izwi rokuti mahatma ikozvino rinoshandiswa munharaunda yaro yekuberekwa pamwe chete kune ani zvake anofungidzirwa mukuru mumweya sekune Indian fakirs uye yogis. Mune masikati, izwi rinowanzoshandiswa kuna avo vanoonekwa seve vakawana chikwata chepamusoro chekudzivirira. Saka aya mazwi ave achishandiswa zvakafanana mazana nemazana emakore. Chinhu chakanaka chakapiwa kwavari mukati memakore makumi matatu nemashanu apfuura.
Kubvira pakuvambwa kweTheosophical Society mu1875 kuNew York naMadam Blavatsky, aya mazwi, kuburikidza nekushandiswa kwake, akafunga nenzira yakasiyana uye inoreva zvakanyanya kupfuura kare. Madam Blavatsky akataura kuti akanga adzidziswa nevashandi, masters kana mahatmas kuti vagadzire hurumende kuitira chinangwa chekuzivisa nyika dzimwe dzidziso pamusoro paMwari, Zvisikwa neMunhu, izvo dzidziso dzenyika dzakanga dzakanganwa kana dzisina kuziva. Madam Blavatsky akataura kuti avo vanoziva, masters uye mahatmas avo vaaitaura vaiva varume vaiva nehuchenjeri hwakanakisisa, avo vaive neruzivo rwemitemo yehupenyu nerufu, uye yezviitiko zvezvisikwa, uye ndiani akakwanisa kudzora masimba e chimiro uye kubudisa zviratidzo maererano nemutemo wepanyama sezvavanoda. Akataura kuti avo vanoziva, masters uye mahatmas kubva kwaari vakagamuchira ruzivo rwake vakanga vari kuMabvazuva, asi kuti vakange varipo munzvimbo dzose dzenyika, zvisingazivikanwi kuvanhu vose zvavo. Zvakare zvakataurwa naMadam Blavatsky kuti vose vakagamuchira, masters uye mahatmas vaiva kana kuti vakanga vari varume, avo kuburikidza nemakore mazhinji uye nekuedza kwakasimba vakange vabudirira mukuziva, kutonga nekudzora zvisikwa zvavo zvepasi uye vakakwanisa uye vakaita maererano nekuziva uye uchenjeri hwavakanga vawana. MuTheosophical Glossary, rakanyorwa naMadam Blavatsky, tinoona zvinotevera:
"Apt. (Lat.) Adeptus, 'Iye akawana.' Mukuita zvemashiripiti uyo akazosvika padanho rekutanga, uye ave Mudzidzisi mune sayenzi yehuzivi hweEsoteric. "
"Mahâtma. Lit., 'mweya mukuru.' Anodzidza wepamusoro-soro. Vanhu vakakwidziridzwa avo, vawana kukunda mitemo yavo yakaderera saka vanorarama vasina kufungidzirwa ne "munhu wenyama," uye vane ruzivo uye simba maererano nesero ravakasvika mukushanduka kwavo kwemweya. "
Muchikamu che "Theosophist" uye "Lucifer" musati ya 1892, Madam Blavatsky akanyora zvakawanda pamusoro pevarume, masters uye mahatmas. Kubvira panguva iyoyo mabhuku akawanda akave akaumbwa kuburikidza neTheosophical Society uye umo mashandisirwo mazhinji akashandiswa nemashoko aya. Asi Blavatsky ndiye chiremera uye anopupurira nyika isati yavapo kune hupenyu hwaaitaura sevashandi, masters uye mahatmas. Aya mazwi akashandiswa na theosophists nevamwewo nenzira yakasiyana pane zvinorehwa naBlavatsky. Pane izvi tichazotaura zvakare. Vose avo, zvisinei, avo vakauya vachibatana uye vakagamuchira dzidziso dzakapiwa naye uye avo vakabva vataura uye gare gare vakanyora pamusoro pevarume, masters uye mahatmas vakapupura vakawana ruzivo rwavo kubva kwavari. Madam Blavatsky nedzidziso dzake uye zvinyorwa zvakapa humwe humwe ruzivo rwezivo kubva pane zvakasvika dzidziso dzichizivikanwa semasosophika.
Kunyange zvazvo Madam Blavatsky nevaya vainzwisisa dzidziso yake vakanyora nezvevanyengeri, masters uye mahatmas, pakanga pasina huwandu hwakajeka kana ruzivo rwakapiwa hunoenderana nechinangwa cheumwe neumwe chinoparadzaniswa kubva kune rimwe remashoko aya, kana nezvemaitiro uye zvikamu izvo zvisikwa izvi zvinogutsa mukushanduka-shanduka. Nokuda kwekushandiswa kwakaitwa nemashoko naMadam Blavatsky uye Theosophical Society, aya mazwi akazogamuchirwa nevamwe, avo vazhinji vane theosophists, vanoshandisa mazwi akafanana uye nenzira yakavhiringidzika uye isina kusarura. Saka pane kuwedzera kudiwa kwemashoko sekuti ndiani uye kuti zvinorevei, kuti chii, kupi, nguva, uye, sei, izvo zvavanomiririra zviripo.
Kana pane zvisikwa zvakadai sevatenzi, masters uye mahatmas, saka vanofanira kuva nenzvimbo chaiyo uye danho rekushanduka-shanduka, uye nzvimbo ino uye nhanho inofanira kuwanika mune imwe nzira kana urongwa hunoita zvechokwadi kune Mwari, Zvisikwa uye Munhu. Pane imwe nzira inogadzirwa nechisikigo, chirongwa chaicho chiri mumunhu. Iyi hurongwa kana urongwa hunozivikanwa sezodhiacac. Nyaya yeZodhiya yatinotaura, zvisinei, haisi mapoka enyeredzi ari kumatenga anozivikanwa neshoko iri, kunyange izvi zvinyorwa gumi nemaviri zvinofananidzira zvinyorwa zvedu. Uyewo hatitauri nezvezhiacac mupfungwa iyo inoshandiswa nevazivi venyeredzi vemazuva ano. Nzira yezodhiac yatinotaura yataurwa mune dzakawanda zvinyorwa zvinyorwa zvakaonekwa mu "Shoko."
Ichawanikwa kuburikidza nekutsvaga nyaya idzi kuti zodiac inofananidzirwa nedenderedzwa, iyo iyo inomiririra nzvimbo. Denderedzwa yakaparadzaniswa nemutsara wakarurama; iyo hafu yepamusoro inomiririra kusimiririra asina kuonekwa uye hafu yepasi yezviratidzwa zvose. Zviratidzo zvinomwe kubva pamukenza (♋︎) kusvika kuCricricorn (♑︎) pasi pemutsara wakarereka unobatana nezvose zvinoratidzwa. Zviratidzo pamusoro pepakati rakatsetseka rutsanga zviratidzo zvezvinhu zvisati zvaratidzwa.
Zvinhu zvakaratidzwa zvose zvezviratidzo zvinomwe zvakakamurwa kuva nyika ina kana zvikamu zvinotanga, izvo zvichibva kune zvakaderera, ndezvenyama, astral kana zvepfungwa, mafungiro nemweya kana nyika. Iyi nyika inofungidzirwa kubva pakufungidzira uye kushanduka kwemaonero. Nyika yekutanga kana nzvimbo yakasikwa kuvapo ndeyemweya, iyo iri mumuganhu kana ndege, kenza-capricorn (♋︎-♑︎) uye muhupenyu hwayo inofema nyika, kenza (♋︎). Inotevera ndiyo nyika yehupenyu, leo (♌︎); iyo inotevera ndiyo maitiro enyika, virgo (♍︎); uye yakaderera ndeye nyika yepabonde, libra (♎︎). Ichi ndicho chirongwa chekugadzirisa. Kubatsirana nekupedzwa kwenyika idzi kunoonekwa mukushanduka kwavo kwezvinhu. Zviratidzo zvinopindirana uye zvinopedza zvataurwa zvinonzi scorpio (♏︎), sagittary (♐︎), uye capricorn (♑︎). Scorpio (♏︎), chido, ndiko kuwanikwa kunowanikwa mune fomu yenyika, (♍︎-♏︎); kufunga (♐︎), ndiko kudzora kwehupenyu hupenyu (♌︎-♐︎); uye munhu oga, capricorn (♑︎), ndiko kuguma uye kuperera kwefema, nyika yezvokunamata (♋︎-♑︎). Nyika dzemuMweya, dzepfungwa uye dzenyika dzakaenzana uye dzinofananidzwa mukati uye kuburikidza nenyika chaiyo, libra (♎︎).
Nyika imwe neimwe ine zvinhu zvayo pachayo iyo inoziva kuti iri munyika chaiyo yavari uye iyo yavanogara. Pakugadziriswa, zvipenyu zvefema yenyika, yehupenyu hwehupenyu, avo vari muhupenyu hwenyika, uye avo vari munyika chaiyo mumwe nomumwe aiziva nyika yavo, asi imwe kirasi kana mutsa munyika yavo yakanga isina kana isingazivi kune avo vari mune dzimwe nyika. Semuenzaniso, munhu chaiye wepanyama haazive maitiro e astral ari mukati make uye ari kumupoteredza, kana wehupenyu hwehupenyu hwaanogara naye uye hunopinda kuburikidza naye, kana hwekufema kwemweya kunomupa iye kuve kwakasiyana uye mukati uye kuburikidza nekubudirira kunobvira kwaari. Zvose izvi zvenyika nemitemo zviri mukati uye zvakapoteredza munhu wemunhu, sezvavari mukati uye zvakapoteredza nyika. Chinangwa chekushanduka-shanduka ndechokuti nyika idzi dzose uye mazano avo akachenjera anofanira kuenzaniswa nekuita nekuchenjera kuburikidza nemuviri wemunhu, kuitira kuti munhu mukati memuviri wake wenyama ave nekuziva zvose zvisikwa uye agokwanisa kuita nekuchenjera mune kana kuti yose yenyika apo achiri muviri wake wenyama. Kuti aite izvi zvishoma nezvishoma uye achienderera mberi, munhu anofanira kuzvigadzirira mutumbi kune imwe neimwe yenyika; muviri mumwe nomumwe unofanira kuva wezvinhu zvenyika umo maanoita masimba. Muchikamu chemazvino chekushanduka-shanduka, munhu ane mukati make mazano ayo akanzi mazita; izvo zvinoreva kuti, iye mweya yekufema kuburikidza nehupenyu hwekutsvaira nenzira chaiyo mukati momuviri wake wenyama unoita munyika yepanyama. Asi iye anoziva muviri wake wenyama chete, uye wenyika chaiyo bedzi nokuti haana kuvaka chimiro chechigarire kana chimiro chake. Iye anoziva nyika chaiyo uye muviri wake wenyama ikozvino nokuti ari kushanda mumuviri wenyama pano uye ikozvino. Anoziva muviri wake wenyama chero bedzi unopedza uye hausisirizve; uye sezvo nyika yepanyama uye muviri wenyama inongova nyika uye muviri wekuenzana uye kuenzanisa, naizvozvo haakwanisi kuvaka muviri wenyama kuti ugare kuburikidza nekushanduka kwenguva. Anoenderera mberi kuvaka miviri yenyama imwe pashure peimwe kuburikidza nehupenyu hwakawanda hwaanorarama nawo kwenguva shomanana, uye pakufa kweumwe neumwe anobva apinda muhutano hwekurara kana kuzorora muhumiro yepasi kana munyika yepfungwa asina kuenzana mazano ake uye akazviwana iye. Anodzokera zvakare mune zvenyama uye achadaro achienderera mberi achiuya hupenyu mushure mehupenyu kusvikira azvigadzirira iye muviri kana miviri kunze kwemuviri, maanogona kurarama achiziva mukati kana kunze kwepanyama.
Vanhu zvino vanogara mumuviri wenyama uye vanoziva nyika chaiyo chete. Mune ramangwana vanhu vacharamba vachirarama mumuviri wenyama, asi vanhu vachakura kubva munyika yepanyama uye vazoziva imwe neimwe yezvimwe nyika sezvavanovaka muviri kana nguvo kana chipfeko nacho kana kuti kuburikidza kwavanogona kuita munyika idzodzo.
Aya mazwi, tenzi uye mahatma vanomiririra zvikamu kana zvidimbu zveimwe imwe nyika nhatu. Iyi nhanho inoratidzwa maererano nechiyero nezviratidzo kana zviratidzo zvepurogiramu yepasi rose yezodhiac.
Munhu akachenjera ndeye akadzidza kushandiswa kwepfungwa dzomukati dzinofananidzwa neicho chezvinhu zvenyama uye ndiani anogona kuita mukati uye kuburikidza nekunzwa kwemukati munyika yenzvimbo uye zvido. Kusiyana ndeyekuti kana munhu achiita kuburikidza nemanzwiro ake munyika yepanyama uye anoziva kuburikidza nemafungiro ake zvinhu zvinonzwisisika kumanzwiro epanyama, anonyanya kushandisa pfungwa dzekuona, kunzwa, kunhuhwira, kunonoka uye kugunzva munyika yenyika uye zvido, uye kuti apo maitiro uye zvishuwo zvaisagona kuonekwa kana kutaridzirwa nemuviri wenyama, iye zvino anokwanisa kuburikidza nekurima uye kukura kwekunzwa kwemukati, kuona uye kubata nemanzwiro anoita nenzira kuburikidza izvo zvido zvinokurudzira chiito chekuita. Vane ruzivo sezviito zvakadaro mumuviri wakafanana wakafanana nemuviri, asi chimiro chinozivikanwa kuti ndicho chiri maererano nemamiriro uye chiyero chechido chazvo uye inozivikanwa kune vose vanogona kuita nekuchenjera pane ndege dze astral. Izvi zvinoreva kuti, semunhu akachenjera anogona kutaura kurudziro uye chiremera uye chimiro chechimiro chemunhu chero upi zvake wepanyama, saka chero munhu ane ruzivo anogona kuziva chimiro uye chiyero chepi zvimwe zvaanogona kuonana nazvo munyika-chido. Asi apo mumwe munhu anorarama munyika yepanyama anganyengedza mumwe munhu munyika yepanyama, seyemudzi wenyika uye chinzvimbo chake, hakuna munhu ari mumiro-nyika inoshuva inogona kunyengedza munhu ane ruzivo rwehupenyu hwake uye chidimbu. Muhupenyu hwemuviri muviri wenyama unochengetwa wakagadzikana muchimiro nechimiro chinoita kuti nyaya yacho igadzikane, uye chinhu ichi chemuviri chimiro chinokurudzirwa kuita chiito nechido. Muvanhu chaiwo chimiro chakasiyana uye chinotsanangurwa, asi chido hachisi. Munhu akachenjera ndiye akavaka muviri wechishuvo, icho chitunha chechido chinogona kuita nenzira yake ye astral kana pachayo sechimiro chechido, chaakapa. Munhuwo zvake wepanyika ane chido chakakura, asi ichi chido chinhu chisina simba. Iyo nyanzvi yakaumba simba repofu rechido muhumiro, iyo isisipo bofu, asi ine pfungwa dzinoenderana neyemuviri womufananidzo, unoita kuburikidza nemuviri wenyama. Naizvozvo, munhu anonyatsoziva, ndiye akawana kushandiswa nekushanda kwechido chake mumutumbi womuviri kunze kwekuti kana kuzvimirira kubva mumuviri wenyama. Iyo nharaunda kana nyika umo maitiro akadai semabasa akadaro ndeye nyika yepasi kana yepfungwa yemafomu, pa ndege yevirgo-scorpio (♍︎-♏︎), chimiro-chido, asi anoita kubva pane chinangwa che scorpio (♏︎ ) chido. Munhu ane ruzivo rwakasvika pakuzara kwechido chechido. Muchenjeri saizvozvi muviri wechishuwo unoshanda muchimiro kunze kwepanyama. Zviratidzo zvehutano ndeyekuti anoshanda nezvinhu zvinoshamisa, zvakadai sekugadzirwa kwemafomu, kuchinja kwemafomu, kudana kwemafomu, kusungirirwa kuita zviito zvemafomu, ose ayo anotungamirirwa nesimba rechido, sezvaanoita kubva kuchido kune mafomu uye zvinhu zvepfungwa yenyika.
Tenzi ndiye akafananidza uye akaenzanisa nhengo dzepabonde yemuviri wenyama, uyo akakunda zvishuwo zvake uye nyaya yenyika iyo, uye ndiani anotonga uye anotungamirira nyaya yehupenyu hupenyu pane ndege ye leo-sagittary (♌ ︎ -♐︎) kubva panzvimbo yake uye nesimba rekufunga, sagittary (♐︎). Munhu akachenjera ndeye uyo, nesimba rekuchiva, akawana kusunungura muitiro-nyika inoshuva, yakatsauka uye kunze kwemuviri wenyama. Tenzi ndeyeiye akaziva chido chekunyama, simba rechido, uyo ane simba rekutonga kwehupenyu, uye ndiani akaita izvi nesimba rekufunga kubva panzvimbo yake mupfungwa dzepfungwa. Iye ndiye tenzi wehupenyu uye akachinja muviri wekufunga uye angararama mumuviri uyu wemafungiro akajeka uye asingasununguki kubva kune chido chake mumuviri uye mumuviri wenyama, kunyange zvazvo angararama mukati kana kuita nenzira imwe neimwe kana zvose. Munhu chaiye anobata zvinhu, anonyatsobata nezvido, tenzi anobata nepfungwa. Chimwe nechimwe chinoita kubva munyika yake. Munhu chaiye ane pfungwa dzinomukwevera kune zvinhu zvenyika, munhu ane njere akashandura ndege yake yezviito asi achiri ane pfungwa dzinofanana neyedziviri; asi tenzi akakunda uye akamuka kumusoro kwevose kune zvinangwa zvehupenyu izvo pfungwa uye zvido uye zvinhu zvavo zviri mumuviri zvinongoratidzika. Sezvo zvinhu zviri mune zvenyama uye zvido zviri mumamiriro enyika, saka pfungwa dziri munyika yehupenyu. Zvinangwa zviri mupfungwa dzepfungwa pasi pano zvido zvipi zviri mumamiriro enyika uye zvinhu zviri munyika. Sezvo munhu ane ruzivo anoona zvishuvo uye mafomu zvisingaoneki kune munhu chaiye, saka tenzi anoona uye anobata nemafungiro nemafungiro asina kuonekwa neavo vanoziva, asi izvo zvingave zvakabatwa nemunhu akakodzera zvakafanana nenzira iyo munhu wepanyama anoona chido uye chimiro chisati chiri chemuviri. Sezvo chishuvo hachisi chakasiyana nemafomu mumunhu chaiwo, asi zvakadaro mune zvakanyatsonaka, saka mukufungidzirwa kwakanaka hakusi kwakasiyana, asi anofungidzirwa inhengo yakasiyana yemudzidzisi. Sezvo munhu ane ruzivo ane murairo wakazara uye chiito chechido kunze kwechimiro icho munhu wepanyama asina, saka tenzi ane chizere uye chisina basa uye simba rekufunga mupfungwa yemafungiro ayo asina kunaka asina. Chimiro chezvinhu chetenzi ndechekuti anobata noupenyu uye zvinangwa zvehupenyu. Anotungamirira uye anoronga mazamu ehupenyu maererano nezvinangwa. Anoshanda saizvozvo nehupenyu semudzidzisi wehupenyu, mumuviri wemafungiro uye nesimba rekufunga.
A mahatma ndewumwe akakunda, akakura kubva, akararama kuburikidza nekukwira kumusoro kwenyika yepabonde yevanhu chaivo, nyika-inoda nyika yezvakanaka, nyika inofungidzirwa nehupenyu uye inoshanda zvakasununguka mumhepo yekufema yenyika semunhu anonyatsoziva uye asingafi, ane kodzero yekusunungurwa zvachose uye kusiyanisa kubva kana kuti kubatanidzwa kana kuita maererano nomuviri wemafungiro, muviri unofarira uye muviri wenyama. Mahatma ndiyo kukwana uye kuguma kwekushanduka-shanduka. Kuputika kwakanga kuri kutanga kwekugadzirisa kwezvinhu zvakaratidzwa zvekudzidzisa uye kukwana kwepfungwa. Unhu humwe mugumo wekushanduka nekukwanisa kwepfungwa. Mahatma inokudzwa uye yakakwana kukura kwevanhu pachavo kana pfungwa, iyo inoratidza kuguma uye kubudirira kwekushanduka-shanduka.
A mahatma pfungwa yakasiyana-siyana isina rusununguko rwekufambidzana neimwe yenyika pasi kudarika mweya yekufema pasi. Mahatma anobata nekufema maererano nemurairo uyo zvinhu zvose zvinofuridzirwa mukuratidzwa kubva kune zvisikwa zvisati zvaratidzwa, uye izvo zvinhu zvose zvinoratidzwa zvakafemerwa zvakare kune vasina kuonekwa. A mahatma anoratidzira nemafungiro, zvisikwa zvisingaperi, zvisizvo zvezvinangwa, uye maererano nezvinoitika zvenyika zvinonzwisisika uye zvinopera. Sezvimwe zvinhu uye zvepabonde munyika yepanyama, uye mafungiro mune zvenyika yechishuvo, uye zvinangwa mupfungwa dzenyika, zvinotora matanho nezvinhu zviri munyika idzodzo, ndizvo zvaanofunga nemitemo isingagumi maererano nezvayo uye mahatmas anoita sei mune zvemweya breath world.
Munhu ane ruzivo haasunungurwi nekuzvarwa patsva nokuti haana kukunda chido uye haasunungurwi kubva ku virgo uye scorpio. Tenzi akakunda chido, asi haasunungurwi kubva pakudiwa kwekuzvarwa patsva nokuti apo iye akaziva muviri wake uye zvaanoda angave asina kunge akashandisa karma yose yakabatana nemafungiro ake nezviito zvekare, uye apo hazvibviri iye kuti aite basa mumuviri wake wenyama wezvino wose karma yaakakonzera kare, zvichave zvakakonzerwa naye kuti adzokezve mumitumbi yakawanda uye mamiriro ezvinhu sezvaachazodiwa kuti agone kunyatsozadzisa zvachose karma yake maererano kumurairo. Mahatma akasiyana neavo uye tenzi mune kuti munhu anofanirwa kunge achifanira kuberekwazve nokuti achiri kuita karma, uye tenzi anofanira kuberekwa zvakare nokuti, kunyange zvazvo asingachagadziri karma ari kushanda izvo zvaakatoita, asi mahatma, zvarega kugadzira karma uye zvave zvashanda karma yose, yakasunungurwa zvachose kubva kune chero chinhu chinodiwa kuti uwane zvakare. Zvinoreva shoko rokuti mahatma rinojekesa izvi. Ma anoratidza manas, pfungwa. Mai ndiye ego mumwechete kana pfungwa, asi mahat is in principle of mind. Ma, iyo pfungwa imwe, inobata mukati mahat, chirevo chepasi rose. Izvi zvisikwa zvose zvinosanganisira zvose zvakaratidzwa pasi uye nyika. Ma ndiyo pfungwa yepfungwa iyo yakasiyana seye, kunyange iri mukati mepasi rose; asi ma inofanira kuva munhu akazara, izvo zvisiri pakutanga. Pakutanga amai, pfungwa, vanoita kubva munyika yemweya yekufema pane kenza yepachiratidzo (♋︎), kufema, uye inoramba iripo nekugadziriswa uye kukurudzirwa kweimwe mitemo nzvimbo yakaderera yekugadzirisa inosvika pa libra ( ♎︎), nyika chaiyo yepabonde, kubva pane imwe nzvimbo mamwe mazano anodiwa mukusimudzirwa uye kukwana kwepfungwa inofanira kuchinjwa. Amai kana pfungwa dzinoita mukati memafungiro evanhu kana maonero evanhu vose kuburikidza nezvikamu zvaro zvose zvekugadzirisa uye nekushanduka-shanduka kusvikira ichibuda uye inokwira ndege nemhepo, nyika nenyika, kuenda kune ndege paanokuma arc inoenderana ne ndege yaakatanga kubva achidzika arc. Yakatanga kumera kwayo nekenza (♋︎); iyo yakaderera pasi yakasvika yaiva libra (♎︎); kubva ipapo yakatanga kukwira kwayo uye inokwira kuCricricorn (♑︎), iyo ndiyo mugumo werwendo rwayo uye ndiyo imwe ndege yakabva kwairi. Yaiva ma, pfungwa, pakutanga kwekushanduka kwekenza (♋︎); ndiyo ma, pfungwa, pamagumo ekushanduka-shanduka pa capricorn (♑︎). Asi amai vakadarika mahat, uye mahat-ma. Izvi zvinoreva kuti, pfungwa dzakapfuura nepakati pezvikamu uye zvidimbu zvepfungwa dzepasi rose, mahat, uye dzakabatana nayo uye panguva imwechete dzakapedza kukwana kwayo zvakakwana, naizvozvo, mahatma.